အခုခေတ် K-popper တွေကို လီဆိုရာကိုသိလားလို့ မေးကြည့်ရင်တော့ သိတဲ့သူကတော်တော်မှ တော်တော်လေး ရှားပါတယ်။ လီဆိုရာ ကတော့ ballad, jazz သီချင်းအမျိုးအစားတွေကိုပဲ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်ပါ။
2019 첫 작업. First work of the year. — ‪신청곡 (Song Request) ft. Suga‬ ‪작사: Tablo, Suga‬ ‪작곡: Tablo, Dee.p‬
A post shared by 에픽하이 타블로 | Tablo of Epik High (@blobyblo) on Jan 22, 2019 at 6:58am PST
ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ လီဆိုရာတစ်ယောက် အသစ် တစ်ပုဒ် ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးနာမည်ကတော့ 신청곡. အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Song Request ပါ။ ပုံစံလေးကတော့ မိုးရွာတဲ့နေ့မှာ နားထောင်ရင် အရမ်းကို နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် ပုံစံလေးပါ။ ballad ဘက်ကို သွားတဲ့ ပုံစံ သီချင်းအေးအေးလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။ ညဘက် အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ နားထောင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားစေနိုင်မယ့် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲနော်။
‪이소라 선배님을 위해 곡을 쓸 수 있어서 행복합니다. 많은 분들에게 위로가 되길 바랍니다.‬ ‪Honored to writeasong for LeeSoRa. Hope it gives many people comfort.‬ — ‪신청곡 (Song Request) ft. Suga‬ ‪작사: Tablo, Suga‬ ‪작곡: Tablo, Dee.p‬
A post shared by 에픽하이 타블로 | Tablo of Epik High (@blobyblo) on Jan 17, 2019 at 5:12pm PST
ရေဒီယိုက လွှင့်တဲ့ သီချင်းကိုနားထောင်ရင်း သူ့ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်အကြောင်းလေးကို ရေးထားတာပါ။ ဒီ သီချင်းလေးကို ရေးပေးထားတဲ့သူကတော့ Epik High အဖွဲ့ရဲ့ Tablo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းထဲမှာ featuring အနေနဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ rapper ဖြစ်တဲ့ SUGA က ပါဝင်ပေးထားပါတယ်။ SUGA ကတော့ သူ့ရဲ့ rap အပိုင်းကို သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ရေဒီယိုက လွှင့်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ နေရာကနေ ရေးသားထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
ဒီသီချင်းလေး ထွက်မလာခင်တုန်းက Tablo နဲ့ SUGA တို့ စတူဒီယိုမှာ တူတူရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ထဲက SUGA နဲ့ Tablo တို့ရဲ့ Collabration လက်ရာလေးကို မျှော်လင့်နေခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လီဆိုရာပါ ပါလာမယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ Tablo အနေနဲ့လည်း လီဆိုရာ အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးပေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ Home ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ Tablo ကိုယ်တိုင် featuring အနေနဲ့ သီဆိုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Music NewsCollaborationkoreakpopLee SoraNew Releasenew songSUGATablo
PREVIOUS POST Previous post: နှစ်သစ်မှာ အခွေသစ်ထွက်လာကြတဲ့ Backstreet Boys
NEXT POST Next post: နိုင်ငံတကာမှာ Top ဖြစ်နေတဲ့ Ariana Grande ရဲ့7Rings